ရှန်ဟိုင်း QianGang ရေကြောင်းစက်မှု Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
20 နှစ် '' developer များနှင့်အတူ, ရှန်ဟိုင်း QianGang ရေကြောင်းစက်မှု Co. , Ltd မှရေကြောင်းလုံခြုံမှုကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အရည်အသွေးဝန်ဆောင်မှုအထူးပြုတင်ပို့ဖို့တဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာသည်။
ရေကြောင်းလုံခြုံမှုထုတ်ကုန်များ၏အကြီးမားဆုံးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအဖြစ်ကျနော်တို့ရုံးနှင့်ရှန်ဟိုင်း, တရုတ်မှာတည်ရှိပါတယ်ရှိရာဂိုဒေါင်ရှိသည်။ ဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆွေးနွေးရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိုဒေါင်ထဲမှာတိုက်ရိုက်ထုတ်ကုန်ကိုစစ်ဆေးကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များပါဝင်သည် Life Buoy & light, Life Jacket & Light,Firefighting Outfit, Fire Hose & Nozzle, Fire Extinguisher, Ladders & parts, Pyrotechnic Signals, Life Raft & Accessories and some Other Marine supplies. Most of these products got CCS and EC/MED certificate. Each order we will provide the valid certificates for our clients.
QianGang ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များဖို့အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးကျူးလွန်နေသည်။ အမြတ်အစွန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, ငါတို့ကပိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များနှင့်အတူဆက်ဆံရေးဂရုစိုက်။ ကျနော်တို့ရှည်လျားတည်ငြိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်အမြတ်ပေးသွားမှာပါယုံကြည်ပါတယ်။ ထိုအ QianGang သူတို့အသေးစားသို့မဟုတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြသည်နေပါစေ, ငါတို့ပဲသင့်ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားမြန်ဆန်ကြီးထွားလာသည် client ကိုမြတ်နိုး။